AFRIKA: Qaaraddii Rejada W/Q:Muna Axmed Cumar
Wednesday June, 20 2018 - 00:45:29
Tuesday March 08, 2016 - 16:56:35 in by
Sida ay baadheen, darseenna aqoonyahannada ku midoobey degelka africaran king, waxa .................
AFRIKA: Qaaraddii Rejada
‘Africa rising, A hopeful Continent’
Dukaamada waaweyn ee ku yaalla dabaqyada dhaadheer waxa buux dhaafiyay alaab nooc walba ah. Waddooyinka dukaamadan waaweyn hor mara waxa buux dhaafiyay baabuur iyo dadweyne ka dukaamaysanaya suuqan weyn. Halkani maaha xaaladda suuqyada waddamada qaniga ah, waa suuqa Onitsha oo ku yaal koonfurta Nayjeeriya! Ku dhawaad saddex milyan oo qof ayaa maalinwalba u soo dukaamaysi taga suuqan una soo doonta alaabada dhismaha, kombuyuutarada iyo cuntooyinka kala duwan. Suuqani wuxu xuddun u yahay ganacsatayaasha gacanka Gini oo ah gobol caan ku ah musuqmaasuqa, budhcadda, faqriga iyo xanuunnada sidoo kalena ah hoyga hal-abuurka ganacsiga iyo hantiilayaasha. Sida ay qirayaan saadaaliyaasha timaaddada Afrikada berri sida ay noqoneyso.
Sida ay baadheen, darseenna aqoonyahannada ku midoobey degelka africaran king, waxa ay isla qireen in qarnigii ugu danbeeyay, lix ka mid ah tobankii waddan ee ugu korista badnaa xaga dhaqaalaha ay ahaayeen waddamo ku yaalla qaaradda Afrika. Siddeed sanno oo ka mid ah tobankii sanno ee u danbeeyay Afrika waxa ay ka korniin badnayd qaaradda Aasiya oo waddanka Jabaan uu ku jiro. Qarnigii u danbeeyay dhaqaalaha waddamada ka hooseeya Saxaaraha ee Afrika waxa uu gaadhay celcelis ahaan 5.7% isaga oo labadii qarni ee ka horreeyay ahaa 2.4%.
Sikastaba ha ahaatee, sida ay qabaan xeel dheerayaasha ku bahoobey degelka Economist waxa ay ku doodayaan in Afrika dhaqaalaheedu aanu hoos u dhacayn, balse uu kor u kacayo marba marka ka danbaysa maadaama lix waddan oo ka mid ah tobanka waddan ee ugu korniinka badan xagga dhaqaalaha adduunku ay ku yaallaan qaaradda Afrika, gaar ahaan inta ka hoosaysa Saxaaraha. Dhawr waddan oo ku yaal qaaradda Afrika ayaa illa hadda intii ka danbaysay 2007 ku guulaytsay in dhaqaalaha calaa qof soo galaa ka bato boqolkiiba 5%. Saambiya ayaa ka mid ah waddamadan.
Waddamo badan oo kale oo ku yaal Afrika oo dhaqaalahooda iyo hantidooda qofeed kor u kacday shantii sannadood ee u danbeeyay ayaa jira. Angola ayaa ka mid ah waddamadan. Waxa kale oo ka mid ah Koongo, Lesooto, Malaawi, Itoobiya, Nayjeeriya, Ruwaandha iyo Tansaaniya.
Tobanka waddan ee xagga Tiknoolojiyadda ugu horreeya qaaradda Afrika:
Tobanka waddan ee ugu horumarsan qaaradda Afrika:
Sishiilis waxa uu kaalmaha hore kaga jiraa waddamada ugu horumarsan qaaradda Afrika. Sannadihii u danbeeyay waxa uu waddanku gaadhay hadafyo horumarineed sidoo kale wuxuu hiigsanayaa waddanku in uu hirgaliyo jasiirado yar yar oo qurxoon. Waddanka qaabdhismeedkiisu aad buu u habaysan yahay waxaana ku yaalla afar iyo toban madaar. Sidoo kale waddanka Sishiilis waa waddanka ugu qanisan Afrika.
Liibiya waa waddan aad uga shaqeeyay una hormariyay cilmibaadhista iyo waxbarashada. Da’da dhimashada ee dalkanna waxa uu muddo aad u badan ahaa 75 sanno. Sidoo kale dhismayaasha waddankan ayaa ah qaar aad u horumarsan.
Waddanka Mowriishiyoos waxa uu ka mid noqday waddamadii ugu dhaqaalaha badnaa Afrika sannadkii 2006-da. Waxa uu ka hor maray Koonfur Afrika sannadkii 2003-ka sidoo kale waxa uu noqday waddankii ugu dhaqaalaha sarreeyay waddamada ka hooseeya Saxaaraha. Waddankan qaabdhismeedkiisa aad buu u heersarreeyaa waxbarashadiisuna aad bay u horumarsantahay.
Kaalinta afraad waxa ku jira waddanka Aljeeriya, kaalinta Shanaadna waddanka Tuuniisiya, halka kaalinta lixaad uu ku jiro waddanka Gaboon. Waddanka Masar ayaa ku jira kaalinta toddobaad ee waddamada ugu hormarsan qaaradda Afrika. Waddanka Botiswaana waxa uu ku jiraa kaalinta sideedaad. Ta sagaalaad Koonfur Afrika ayaa ku jirta ta tobnaadna Naamiibiya.
Shanta qarni ee soo socda waxa la rejaynayaa in Qaaradda Afrika dhaqaalaheedu aad u kordho oo ay dhaafto dhaqaalaha waddamada Aasiya. Si kasta oo waddamada Afrika ku yaallaa ugu caan yihiin saboolnimo, dib udhac, qalalaase, dhac, dagaal iyo dawlad xumo haddana rajada laga qaba horumarka Afrika maaha mid liita.
Afrika: Qaaradda Rejada!
Sourcce © Hiil Qalin
Muxaadaro: Daawo Sh Maxamed Cumar Diri oo ka jawaabay Su'aalo ku saabsan Soonka iyo Bisha Ramadaan
03/06/2018 - 17:06:27
Muxaadaro: Daawo Sh, Maxmed Cumar Dirir oo ka jawaabay Su'aalo ku saabsan Soomka iyo Bisha Ramadaan
02/06/2018 - 18:01:40